China DuoDuo Shopping Cart DG1026 / DG1027 nge-360 ° Rolling Swivel Wheels umkhiqizi kanye umthengisi | UDuoduo
Inqola yokuthenga ye-DuoDuo DG1026 / DG1027 enamasondo angama-360 ° Rolling Swivel
Usayizi Ovuliwe: 50x52x96CM
Usayizi webhasikidi: 36x38x51CM
Usayizi webhokisi: 118x46x17CM
Amasondo Amakhulu: Φ180mm
Amasondo Amancane: Φ100mm
Usayizi Ovuliwe: 57x62x101CM
Usayizi webhasikidi: 40x46x60CM
Iphakheji: 2pcs ibhokisi ngalinye
Usayizi weCarton: 122x54x11CM
Amasondo Amakhulu: Φ240mm
Inqola yokuthenga enebhasikidi, kuyasiza ukubeka izimpahla lapho uthenga. Okwamanje, ubhasikidi ugoqeka, osindisa kakhulu isikhala futhi ulethe lula okukhulu. Kunamasondo amabili ajikelezayo ngaphambili kwenqola, ingasiza inqola ukuthi isebenze ngokushelela. Ungumsizi omuhle wempilo yakho yansuku zonke.
Igoqa amaflethi ukuze igcinwe kalula esiqwini nakwezinye izindawo.
Idizayini egoqekayo yokugcina kalula; ilungele izikhala ezincane
Isibambo-adjustable isibambo nge foam ukubambelela induduzo eyengeziwe
Ukwakhiwa okumangele kokuqina okuhlala isikhathi eside
Amasondo anesisindo esindayo esindayo alungele abahlali bedolobha, abafundi kanye nabantu abadala
Ilungele ukuthenga, ukukhempa, ukuwasha izingubo, ukuya engadini yolwandle nokuningi
Kungakhathaliseki ukuthi uyothenga, uhlanza izingubo noma uchitha usuku olwandle, le nqola enamagingqa yokusonga enamasondo yenza uhambo lube lula. Amasondo anomthwalo osindayo, ajikelezayo anamathayi enjoloba enza kube lula ukuwasebenzisa, futhi isibambo esishintsha ukuphakama esibambe amagwebu sinikeza induduzo ephezulu. Inqola enkulu esongekayo enamasondo nesibambo sokugoqana iflethi ukuze ukwazi ukuyigcina ngokushesha futhi kalula endaweni engaphandle kwendlela lapho ingasetshenziswa.
I-Easy Wheels Mini Shopping Cart ibe yinqola yokuqala yomkhakha ngamandla ezimboni okusetshenziswa ekhaya. Lapho ulele phansi, inqola isongwe. I-Dia enikeza inani elincomekayo lokulula ngosayizi ohlangene. Le modeli ethile iza namasondo angempela akhonjiswe nge-chrome.
Langaphambilini Inqola yokuthenga ye-DuoDuo DG1015 enamasondo amathathu ajikelezayo kanye nesikhwama se-Canvas esikhiphekayo
Olandelayo: Inqola Yokuthenga ye-DuoDuo DG2035 Metal Utility Trolley Dolly eneSihlalo Esigoqekayo
Inqola Yokuthenga Ehamba Phambili
Izinqola ezihamba phambili zokuthenga
Inqola Yokuthenga Egoqekayo
Inqola Yokuthenga Enamasondo Elula
Ukugoqa inqola yokuthenga enamasondo ajikelezayo
Ukugoqa inqola yokuthenga enamasondo
Inqola Yokuthenga Esindayo Esindayo
Inqola Yokuthenga Ekhaya
Inqola Yokuthenga Enkulu
Inqola Yokuthenga Yezinsimbi
Inqola yokuthenga ye-DuoDuo DG1007 Stair Climber Foldi ...
I-DuoDuo HC150S-P 250S-P ene-360 Degree Swivel W ...
Ikalishi leDuoDuo Dolly-WG8003 elihambisa inqola yengxenyekazi yetroli
DuoDuo amaseviyethi wemithwalo ye-DX3011 Nge-Tele ...
Inqola yokuthenga ye-DuoDuo DG1008 enesikhwama esikhiphekayo ...
Inqola yokuthenga ye-DuoDuo DG2035 Metal Utility Troll ...